निता लाई कोदो बारी मा चीकेको | Kamsastra
Sex, निता लाई कोदो बारी मा चीकेको, नेपाली यौन कथा, मलाई लोग्ने होइन,
गत वर्ष को कुरा हो मा ओफ्फिस को काम ले काठमाडौँ बाहिर गयको थिय तेसै क्रम मा हेटौडा को यौटे स्कूल मा हाम्रो प्रोगर्म गर्नु पर्ने थीयो हाम्रो कार्य क्रम ३ दीन को थियो हाम्ले कार्य क्रम गर्ने स्कूल मा नीता नाम गरेकी मीस रैछ उसंग मेरो राम्रो चीनाजानी भयो र आँखा पनि जुदो म भर्खर २५ २६ बर्सको ठिटो र अनि आली किलर सोभाबा को त्यो मीस संग मेरो लामो कुरा भयो र हाम्लाई बस्न को लागि नजि को यौटे घर मा हेडमास्टर ले लागीदेनु भयो र उ पनि हामी संगै आइ र धरै बेर बसी र उसको नुम्बेर पनि मलाई दी र गइ सुत्न लागेको बाला मीस्कल आयो र मैले फोने गरे यति छोटो समय मा हामी बीच के सम्बन्द बानो बानो मैले ठ पायन उ प्राय म संगै बस्थी र म संगै कुरा गर्थे अनि हाम्रो स्कूल मा अन्तिम दीन को दीन हामी भोलि बिहान जाने कुरा गरी गाऊ म लोकल कुखुरा र लोकल रक्सि खान जाउ तिर लागौउ निता को फोन आयो र उस्ले मलाई स्कूल म बोलाई म साथीहरु लाई म एकछिन म़ा आउछु भनेर हीडे उसको र मेरो लमु कुरा भयो उ र म चिकन को लागि तयार भाको बेला उसको फोने आयो र उ हीडी म हिडे गयर साथीहरु संग रमाइलो गरी फर्किय
मित्रहरु त्यो रात त मेरो कल्पना मै बित्यो त भोली को लागि एक झिनो आसा चाँही मन मा थियो,
भोली पल्ट को मेरो रोमन्स ले भरिय्को बिहानी को काहानी पढ्नुस् ल।।
चोबी सकेको लाडो ले राम्रो सँग नचिकी कनै निकाल्नु पर्दा शायद उनलाई पनि राम्रो लागेको थिएन होला र मलाई पनि जसरी भएपनि तीनलाई राम्ररी नचिकिकन त म काठमाडौं जादै जान्न भएको थियो, एस्तैमा भोली बिहान आउनु भनेर फोन गरेपछी मन मा भोली चिक्न पाइने भो भनेर मन्मनै भोली कसरी चिक्ने भन्ने परिकल्पना गर्दा-गर्दै कति खेर निदाएछु थाहै भएन, एक्कासी ७।३० बजे तिर पो मोबाइल कराउदा बिउझे र हेर्दा त निता को,"अझै उठ्नु भाछैन, आजै जान लाग्नु भा हो र ? " भने पछि मैले पनि तिमलाई छोडेर कसरी जाउ, कहाँ छौ, म आउ है भनेको, हुन्छ म एकलाई छु आउनुस् भनि। मन खुशी ले फुरुङ भयो। छिटो-छिटो सरसफाइ गरेर हिंडे मपनि निता लाई चिक्ने तयरीमा। १० मिनट मा नै उनको छेउ मा थाहै नपाउने गरि पुगेर हेरी बसेको त हात मा हन्सिया लिएर एकोहोरो टोलाएर पो बसेकी रैछिन। तीनलाई देखेर साह्रै माया लागेर आयो र उनी बसेको छेउमै गएर टुक्रुक्क बसे अनी के सोचेको त्यस्तो बिधी कोइ आएको थाहै नपाउने गरि भने, प्रतिउत्तर मा मलाई हेरेर दुखलाग्दो गरि फिस्स हासिन मात्रै, ओहो त्यो अवस्था देखेर साह्रै माया पलाएर आयो, मैले त उनको भावना सँग खेल्न खोजेको हैन। के सोचेको थिए भने इनलाई पुती पनि चिलाएको रछ भने मेरो लाडोले रगड्दिन्छु, हामी दुबैको चाहना पूरा हुन्छ, के भो तनी जस्तो लग्यथ्यो तर अहीले इनको अनुहारको रङ देखेर मेरो मन मा पनि प्रेम पलाएर आयो। अब के गरु ? अनायसै मुख बाट लामो सुस्केरा आयो, उनलाई आफुतिर ताने र उनको टाउको आफ्नो काध मा राखेर ढाद सहलाइराखे। एकै छिन् पछि मेरो मुख मा जिग्यासु भाव ले हेरिन र मेरो ओठै हलुका तरिकाले चुम्बन गरिन, त्यो चुम्बन मलाई साह्रै मिठो लाग्यो र मैले पनि उन्का दुबै गाला आफ्नो हत्केला मा राखेर ती रसिला ओठ मा लामो चिम्बन गरे। मेरो लाडो मा नसा चड्यो तेस चुम्बन ले शायद उनको शरीर मा पनि, तेसैले होला उनले लामो सुस्केरा हालिन र मेरो आँखा मा आँखा जुदाइन र मिठो मुस्कान छरिदिन। उनी काल्ना को डिल मा बसेकी थिन, म उनको अगाडि आफ्ना दुबै हात उनको कम्मर मा राखेर बसेको थिए, उनको एक हात मेरो काध मा थियो भने अर्को मेरो टाउको मा।
मलाई भित्र देखि इमोसन जगेर आयो, लाडो मा जोस भरिएको थियो र चिक्न मन लागेको थ्यो। मैले उनको छाती मा आफ्नो नजर टेकाए र दाहिने हाल ले कुर्था बाहिर बाटै दुध हात्मा लिए। प्रतिउतर मा राम्रो लाग्यो? भनेर सोधिन। हिजो बेलुका त मलाई प्यासी नै छोडेउ क्यारे भने। उनले केही बोलिनन, मात्र मेरो ओठ मै चुमेर मन्द मुस्काइन्। मलाई हिजो को प्यास अहिलेइ मेटाउन त भनेको जस्तो लाग्यो र बाहिरै बाट थाइ मा किस गरे अनी ओठ मा चुमेर कुर्था भित्र हात हालेर दुध को मुन्टा खेलाइदिन थाले। तेस्पछी उनी काल्नामा पल्टिन। मपनि उनिमाथी सुतेर
उनको अनुहार भरी जता-ततै किस गरे अनी फेरी ओठ मा लामो किस गरे र यस्पटक उनको मुख भित्र जिब्रो हलिदिए, उनले पनि खुब मिठो तरिकाले जिब्रो चुसिन र मैले पनि। यसरी चुम्दै म उनको घाटी तिर चुम्न लागे र अझै तल सरेर कुर्था उचालेर नाइटो नेरै चुमे, नाइटो भित्र जिब्रो घुसरे। उनले दुबै हात मेरो टाउको मा रखेकी थिन र लामो सास फेर्दै थिन्। म फेरी कुर्था अझै माथि सारेर उनको ब्रा को हुक खोलेर दुध लाई दुबै हात मा लिएर जिब्रो ले दुधका मुन्टा चलैदिए। उनको इमोसन बड्दै थियो शायद लामो सास फेर्नु साथै सुईयाअ आआअ गर्दैथिन्। मलाई उनको पेन्टी खोलेर हेर्न मनलाग्यो र चुम्दै तल सर्दै गए र नाइटो मा किस गरिराखे। येसैबेला दुबै हातले उनको सुरुवल तल सर्न खोजेको थिए, कुरा बुझिछन की क्यहो चाक उठाइदिन र मैले पनि आरम ले सुरुवाल खोल्दिए। आह क्या सेता मज्जाका थाइ, रातो पेन्टि लगाएकी रैछन,त्यो देख्ने बितिक्कै मेरो लाडो त पाइन्ट च्यातेरा बाहिर निस्किन्छ की जस्तो भयो। आफुलाई सम्हाले र उन्का ती रहरलाग्दा थाइ मा किस गरे। दाहिने हात को चोर् औंला ले पेन्टीको एक छेउ बिस्तारै तल ताने। मेरो मनै रहेन र दुबै हात ले पेन्टी खोलिदिए आह भुक्क उठेको त्यो पुती काला चिल्ला रुमहरु अनी तेसको बिच्मा परेको चिरा बाट रातो कलिलो टिसी को टुप्पो बाहिर निक्लिएको। क्या राम्रो पुती। त्यो रातो टिसीलाई आइस्क्रिम चाटे जसरी चाटिदिन मन लायो। भुत्ला माथिनै दबाएर एकपटक किस गरे र जिब्रो को टुप्पो ले टिसी पनि छुस्स छोइदिए। निता ले लामो सुस्केरा हालिन्। ठ्यक्कै टिसी को तल पुतीको मुख्बाट चिप्लो पानी निस्कियो। मेरो मन्मा काउकुती लाग्यो र त्यो चिप्लो पानी दाहिने बुडी औंला ले चलाइदिए र फेरी जिब्रोले माथिबाट टिसीलाई चलाइराखे अनी पुतीको दुल्हो मा बुडिऔल आस्तेले पसाए। नितालाई अती भएछ क्यारे चाक तल माथि उठाउन लाइन र मुख्बाट मदहोसी को स्वोर निकालिन। मैले अब टिसीलाई आफ्ना ओठ मा राखेर चुस्दै बुडिऔला लाई पुतीको दुलो मा रगडिराखे। यतिकई मा भाउजु ले मलाई माथि ताने जस्तो गरिन र सासले नै बाअबाअ अब छिटो गर्नुन म त मर्न लाई सके भनिन्। मपनि अब यो सहि बेला हो भन्ने ठानेर उनको शरीर माथि लपक्क लायर सुतेर लाडो हात्मा राखेर पुतीको मुखै मा पुराए। निता ले देब्रे खुट्टो फटाइन र मेरो लाडो आफ्नो हातले समातेर पुतीको दुलो मै रखिन अनी मेरो काध मा हात राखिन। मैले पनि उनको ओठ मा चुमेर आस्तेले लाडो पसाए। य्स्तो लाग्दै थियो की मा आनन्द को सागर मा गहिरिदै गैराखेको छु। तेतिबेला भाउजुले लामो सास लीईन र उउउफ्फ्फ गरिन्। म नसा मा मस्त भय र निता को तातो पुतिमा आफ्नो लामो रन्केको लाडो ल्वममा ल्वममा छिराए। मैले मेरो स्पीड बडाइदै गए निता ले पनि तल बाट बरोबर साथ दिदैथिन र मुख्बाट पनि उहु उहु उहु आअ आअ अझै अझै जस्ता शब्द निकालेर मलाई हौसला बडाउदैथिन।
चिक्दै जादा मेरा गेडा ले ठोकेर होला प्वत्-प्वत आबज आएको थ्यो भने, लाडो को घर्सडले गर्दा क्वच्-क्वच आबज पनि आइरखेको थियो। मेरो पुती फोर्देउ बाबा, कति मजा आको अ अ अ गर्दा पुरै गेडा पस्नी गरेर चिक्दै थिए म। संसार सबै भुलेको थिए। अजै जोड ले छिटो- छिटो गर्दै थिए मेरो पनि लाडो को छाला च्यातिए पनि च्यातियोस भनेर झन भित्र पसाउन खोज्दै थिय मलाई फुसी झर्ला जस्तो हुन मन लाग्यो। मेरो त झर्न लायो नानु भन्दैथिए मैले कन्ट्रोल गर्नै सकिन ५,६ चोटि झन छिटो-छिटो-छिटो पेलेको मात्रै थिय एकैचोटी धचक्क ठेल्दा पुरै फुसी निक्ल्यो। धेरै बेरसममा लाडो बाहिर निकाल्नै सकिन पुरै फुसी भित्र नै झर्यो। एक्पटक लास्ट्मा लाडो पुती भित्र हुँदै येसो तल हेरको मेरो त जरा सममै भित्र पसेको रैछ, निता ले मेरो अनुहार हत्केला मा लिएर मलाई एक मिठो लामो किस गरिन आफ्नो निधार मेरो निधार मा जोडिन र मुसुक्क हासिन्। म आस्तेले लाडो बाहिर झिके छेवोइमा तेतिकै उत्तनो परेर सुते। उनी पनि एक छिन् त्यसरी नै बसिन र केही बेर पछि बाबा धेरै बेर भैसकेको रछ उठ्नोस भनिन्। म उठेर कपडा लगाए र उनले पनि। अब हामी बीच बोल्ने कुनै शब्द थियन, मैले उनलाई टाउको मा समातेर एक छोटो किस गरे र अब जानु पर्छ भने। उनले गह भरी आसुँ पारेर कहीले जानुहुन्छ? काठमाडौं गएर मलाई नभुल्नु है! भनिन , मेरो धड्कन हौ तिमी कसरी भुल्न सक्छु म भनेर फेरी छोटो किस गरेर उठे। अनी म पहिला हिंडे र केही बेर पछि उनी पनि घर आइन्।
Labels: Sex, निता लाई कोदो बारी मा चीकेको, नेपाली यौन कथा, मलाई लोग्ने होइन